အမေစုရဲ့ အမှိုက်ကောက်ပွဲတော်…ဘယ်လောက် ထိရောက်သလဲ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Critic » အမေစုရဲ့ အမှိုက်ကောက်ပွဲတော်…ဘယ်လောက် ထိရောက်သလဲ…	14
Posted by Thint Aye Yeik on Dec 19, 2015 in Critic, Environment, History, Literature/Books | 14 comments
ရန်ကုန်မြို့လယ် ၄၃လမ်း(အလယ်)ထဲကနေ…ကျနော် နေ့တိုင်း ဖြတ်လျှောက်ပါတယ်။
အမေစုကိုယ်တိုင် ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်လိုက်တဲ့ ”အမှိုက်ကောက်ပွဲတော်”ကျင်းပအပြီး နောက်နေ့ကျတော့…. အရင်တုန်းက ဘာစာမှ ကပ်မထားတဲ့ အဲ့ဒီလမ်း နံရံထက်မှာ … ဗီနိုင်းထုတ်ပြီး ကပ်ထားတဲ့ စာတန်းတွေ….ခပ်စိပ်စိပ်လေး တွေ့လိုက်ရတယ်။
အမှိုက်ကောက်ပွဲတော်ကို နေ့စဉ်….အချိန်နဲ့အမျှ ဆင်နွှဲချင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောလားမသိ…။
အမှိုက်ဆိုတာ ကောက်သင့် / ရှင်းသင့်တယ်လို့… တွေးမိစေတဲ့ သတိပေးချက်မျိုး …စာကပ်ပြီး နှိုးဆော်တာ ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်နည်းတွေးလို့ရတာက…. အခုချိန်ထိ…. အဲ့ဒီလို စာကပ်ပြီး အမှိုက်မပစ်ရလို့…
ပြောနေရသေးတယ်ဆိုကတည်းက….အခုချိန်ထိ အမှိုက်တွေ စည်းကမ်းမဲ့စွာ ပစ်နေကြသေးတယ်…ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်တယ် မဟုတ်လား။
ထပ်တွေ့ရတဲ့အချက်ကတော့…. အဲ့ဒီ စာ ကပ်ထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း….
လမ်းပေါ်မှာ အမှိုက်တွေက ရှိဆဲပါပဲ…။
အမေစုရဲ့ အမှိုက်ကောက်ပွဲတော်ဟာ ကျင်းပနေတဲ့ အချိန်ကလေးအတွင်းမှာပဲ…. ထိရောက်တာလားလို့…မေးခွန်းထုတ်ရမှာဖြစ်သလို….
ဒီတိုင်းပြည်ထဲက တချို့ တချို့သော ပြည်သူတွေဟာ…အမှိုက်ကို စည်းကမ်းမဲ့ မပစ်သင့်ပါလားဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်မျိုး ဘယ်အချိန်မှ ရှိလာမှာလဲ….လို့…မေးစရာ ရှိနေပါတယ်။
.နောက်တစ်ခု ထပ် မေးခွန်းထုတ်ရမှာ ရှိပါသေးတယ်။
အဲ့ဒါကတော့… ကပ်ထားတဲ့ ဗီနိုင်းကို ကြည့်ပါ…..
အမှိုက် မပစ်ပါနှင့် …လို့ ရေးရမှာပါ။ အဲ့ဒါကို အမှိုက် မပြစ် ….လို့ ရေးထားတယ်။
ပစောက်ကို ရရစ်နဲ့ ပြစ်တာက….ပြစ်ဒဏ်တို့…အပြစ်တို့ကို ဆိုလိုချင်တဲ့အခါမှာ သုံးရပါတယ်။
(ပစ်ချ တာကို ဆိုလိုချင်တဲ့ အခါ…ပစောက်ကို စလုံးအသတ်နဲ့… ပစ် လို့ ရေးမှ မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် (ပစ် လို့ ရေးပေမဲ့)အသံထွက်တဲ့အခါကျတော့ Pit လို့ မထွက်ဘဲ Pyit လို့ အသံထွက်တာပါ။ ရေးတော့ အမှန် ဖတ်တော့ အသံဆိုတဲ့ စကားကို ကျနော် သိပ်မကျေနပ်တဲ့ အကြောင်းတော့…နောက် ကြုံရင် ပြောကြည့်ပါအုန်းမယ်။ )
ဆိုတော့… ဗီနိုင်းထုတ်ဖို့ စာစီခိုင်းတဲ့ လူကြီးက စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံအမှန်ကို မသိတော့ဘူးလား…
ဗီနိုင်းထုတ်တဲ့ စာစီစာရိုက် ဝန်ထမ်းကရော… စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံ အမှန်ကို မသိတော့ဘူးလား…
အဲ့လို… သတ်ပုံအမှားလေးတွေ မကြာခဏ တွေ့ရဖန်များလာတော့….
ကျနော့် စိတ်ထဲ ပေါ်လာတဲ့မေးခွန်းက ….မြန်မာနိုင်ငံသား တချို့ဟာ…. ကိုယ့်မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ မြန်မာစာကို ….တကယ်ရော…တတ်ကြသေးရဲ့လား…ဆိုတာပါပဲ။
E.မြောက်မြောက် says: သတ်ပုံအမှား ရှာချင်တာများ
၄၄ လမ်းထိ လျှောက်နေသေးတယ် ညောင်းပါတယ် စပ်စပ်ရာ
အိုင်ခုရဲ့ အယ်ဒီတာ့ သင်ဗုံးမှာ တသ်ဘုံကျီး
alinsett says: .အေးဆို….
kai says: အခုလိုဓါတ်ပုံရိုက်တင်တာ.. ရှိလာတာကိုက.. ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အစ…။
သတ်ပုံကတော့…. သတ်ပြီးသာ ပုံထားလိုက်တော့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: ဒေါ်စု ဘယ်လောက် စွမ်းသလဲ.. ကွမ်းစားတာ ပပျောက်အောက် လှုပ်နိုင်မလှုပ်နိုင်နဲ့ တိုင်းတာမယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘယ်သူဘယ်လောက် ဦးဆောင်ဦးဆောင်
ကောက်ရိုးမီး အကောင်အထည်ဖော်ပုံနဲ့တော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးပေါ့။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အမှိုက်ကိစ္စ စိတ်ဆင်းရဲစရာ။
Mike says: .အဆင်ပြေလာမှာပါကွာ..ကိုယ်ကသာစထား
.ကျုပ်တောင်ကွမ်းဖြတ်လိုက်တာ ၆လလောက်ရှိပေါ့…ကိုယ်မစားတော့စားတဲ့လူကိုတောင်ရွံတတ်နေပြီ .ကျုပ်သူငယ်ချင်း အမတ်တစ်ယောက်လည်းကွမ်းဖြတ်လိုက်ပါဂျောင်း
အောင် မိုးသူ says: ကျတော်ကတော့ ကျတော့်ပတ်ဝန်းကျင် တတ်နီုင်သလောက် ပြောပြတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း စားပြီးလို့ အမှိုက်ပုံးမတွေ့ရင် လွယ်အိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ အိမ်ရောက်မှ ပုံးထဲပစ်တယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေလို အမှိုက်ပုံးနဲ့အတူ ဆေးလိပ်မီးချေတဲ့ဟာပါ ခပ်စိတ်စိတ်ထားရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါ့။ တို့နိုင်ငံက အသားမကျသေးတော့လည်း သောက်ရေခွက်တောင်ခိုးတာမဟုတ်လား။
မြစပဲရိုး says: အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံ မှာလဲ လမ်း ဆိုင်းဘုတ် တွေမှာ စာလုံးပေါင်းတွေမှားတာရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ က မှားမှန်းသိရင်/ ထောက်ပြရင် ချက်ချင်းကောက်ပြင်တတ်တယ်။
ရွှေပြည်က တစ်ချို့ (အများစု) စာစောင် တွေ မှာ မှားသမှ စာလုံးပေါင်း တင်မဟုတ် အကြောင်းအရာ ကလွဲ၊ သဒ္ဒါကမွဲ။ အမှိုက်ကိစ္စအပါအဝင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှု အပိုင်းကတော့ ပြစ်ဒါဏ် တွဲပါမှ လူအားလုံး ညီ မှာပါ။
လောလောဆယ်တော့ လူတွေရဲ့ တွေးခေါ်မှု စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်မှု တွေက မညီကြတာ ကို သတိပြုရမှာပါ။
သဘောကတော့ အချိန်ကာလတို အတွင်း တော့ နတ်ရေစင်ဖြန်းလိုက်သလို ချက်ချင်းကောင်းအောင် ပြောင်းလို့ မရနိုင်ဘူးပေါ့။
အဲဒါကို တဖြေးဖြေး လက်တွဲခေါ်တတ်ဖို့ အတွက် စိတ်ဓာတ်ရေးရာပိုင်းလဲ မြင့်မားကြဖို့ လိုပါတယ်။
မဟုတ်ရင် အမှိုက်ပုံ ကို သူ့အပြစ် ငါ့အပြစ် လွှဲချ နေတာ နဲ့ တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး ရန်ပွါးပြီး ရှေ့တိုးလို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီ ရွာမှာတင် သူကြီးမင်းက အစ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို တိုင်တည်လို့) ကျမ/ကျနော် လုပ်နေတာ မှန်လား/မှား မပြောနိုင်ဘူးပေါ့။
သတ်ပုံကျမ်း မှာ ကျွန်မ/ကျွန်တော် ဘဲ ရှိပါတယ်။
အဲဒါ ကို ကျွန် အဖြစ်မခံနိုင်လို့ ကျ ကြရင်လဲ ဖြစ်နေတာဘဲ။
တစ်ချို့ စာလုံးပေါင်း တွေက ခွ သုံးလဲ သုံးနိုင်တာဘဲလေ။
ဘန်းစကား ဆိုတာကလဲ အလကားမှ မဟုတ်တာ။
သိပ်ပြီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် မမှားရင် ပြီးတာပါဘဲ။
အခုလဲ မြန်မာစာရိုက်တာ ဇော်ဂျီ ထက် ယူနီကုတ် font ကို သုံးဖို့ တော့ ပြောနေကြတာဘဲ။
သုံးလက်စ လွယ်ရာကို သုံးကျင့်ဖြစ်နေတော့ ပြောင်းသင့်လဲ မပြောင်းနိုင်သေး။
Shwe Ei says: -မကြာခင်လေးကမှ ရောက်ခဲ့တဲ့ မြိတ်ကျွန်းစုလို နေရာမျိုးမှာတောင်
-နယ်ခံ သူဌေးတွေရဲ့ အသိပညာမွဲမှုကြောင့် ပဆံကုန်ခံ အပန်းဖြေခရီးထွက်ပေမဲ့
-ရေထဲ အမှိုက်ပစ်တတ်တဲ့ အကျင့်တွေကတော့ မပျောက်သေး
-တကယ်ဆို မြန်မာပြည်ရဲ့ သဘာဝ အလှတရားတွေက အချိန်မီ ထိန်းသိမ်းမဲ့သူလိုနေတာ
-အချိန်မီ ပြစားနိုင်ရင် နိုင်ငံခြား ၀င်ငွေ တွေ တိုးနိုင်သေးတာ
-ဆိုးဆိုးရွားရွား မပျက်စီးခင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေဘဲ ဆုတောင်းတော့မယ် ..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 801
“ဘီလူးကြီး”ogre says: လှိုင်သာယာမှာ လာကောက်စေချင်တယ်
လွှတ်တော်တက်ချိန်တောင် ရမယ် မထင်ဘူး……. ;) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: အမှိုက်ကိစ္စ ကျောင်းကစမှ ရမယ်။
သတ်ပုံမှာ အသံထွက်တူတာ မှားရင် ခံသာပေမယ့်
က် နဲ့ တ် မှားနေကြတာ တော်တော် မကောင်းဘူး။
သက်သက် ကို သတ်သတ် လို့ပေါင်းကြတယ်။
တတ် ကို တက် လို့ ပေါင်းတယ်.
ပိုဆိုးတာ အဆိုအမိန့်တွေ ပြန်ကူးပြီး ဖော်ပြကြတဲ့အခါ သတ်ပုံမှားရင် မူရင်း ပညာရှင်တွေကို အားနာဖို့ ကောင်းတာပါပဲ။
Ma Ma says: (အဆိုအမိန့်တွေ ပြန်ကူးပြီး ဖော်ပြကြတဲ့အခါ သတ်ပုံမှားရင် မူရင်း ပညာရှင်တွေကို အားနာဖို့ ကောင်းတာပါပဲ။)
သတ်ပုံလို့ ပြောလို့ ခေါင်းထောင်လာပြီ။
ကိုယ်မြင်သလောက်မှာတော့ ကျ နဲ့ ကြ အသုံးမှားတာကို တော်တော်ကြည့်ရဆိုးတယ်လို့ ထင်တယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း တခါတုန်းက ခေတ်ဟောင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ပြီးတော့ သဂျီးပြောသလိုပဲ သတ်ပုံကိစ္စ သတ်ပြီးပဲ ပုံထားချင်စိတ်ပေါက်သွားတော့တယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မဲ့ နဲ့ မယ့် လဲမှားတာများတယ်